Umkhiqizi wase China Quality Coaxial Splitter, Factory - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula le-Coaxial > I-Coaxial Splitter
I-Izihlukanisi ze-DC Power Pass Coax Signal Splittersthumela okokufaka kwesiginali yesathelayithi kokukhishwayo okuningana ngasikhathi sinye. Idlulisa ku-2.5GHz futhi ihlukanise amasiginali we-SWM. I-DC PASS ijwayele ukusetshenziselwa i-line powered amplifierer esetshenziswa kuSatellite TV. Imvamisa i-DC12V ifakwa ngokusebenzisa i-splitter ukuze isebenzise amadivayisi weSatellite.
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- I-Coaxial Splitter abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- I-Coaxial Splitter esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.